To: संघीयता लहैलहैको विषय होइन
नरेन्द्र राई - राष्ट्रिय बहस गरिनुपर्छ, मिडियामा छलफल गरिनुपर्छ, चारै तिरका विज्ञहरुको रायहरु बुझ्नु पर्छ। प्रश्न-उत्तर गर्ने ठाउँ बनाउनु पर्दछ। परिवर्तन गर्नु र हुनु भनेको आफ्नो कम्फर्ट जोनदेखि बाहिर निस्कनु हो| हो यो कुरो गाह्रो काम हो तर असम्भब हैन। अघि बढ्नु छ भने यो नगरी हुन्न, हामी सबैले!
‘श्रीमान होइन, पत्रकार बचाइदिनुस्!’
गणेश पाण्डे - एकजना पत्रकार थलिएका छन् । उनका सिर्जनशील मस्तिष्कमा आज अनिश्चियको बादल मडारिएको छ, दुवै मिर्गौला काम गर्दैन, मधुमेह पनि देखिएको छ । मानिस जन्मिएपछि मृत्यु अवश्वमभावी छ । मृत्युलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, पाल्पालीजीलाई अल्पायुमै हामीबाट टाढा हुन जोगाउन सक्छौं, त्यसका लागि राजधानीमा रहेका संचारकर्मीहरुबाट मात्रै रकम संकलन गर्ने हो भने पनि पर्याप्त थियो । तर, त्यसो गर्न हामीले चाहेनौं, या चाहेका छैनौं।
आश्वासन भ्रम, फ्रड इज रियालिटी
दीर्घराज उपाध्याय - दिनहुँ राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा बचाउन गुहार माग्दै छापिने पाठक पत्रहरुले रोगले थलिएर पैसाको अभावमा उपचारबाट बञ्चित भएका नेपालीहरु अबस्था कस्तो छ प्रष्ट पार्छ। बिपन्न वा दयनीय अबस्था भएका सामान्य नागरिकको हविगत भन्दा फरक भएन, डा. वाग्लेको मृत्यु। उनले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय दिनदुखीको सेवामा बिताए। अढाइ दशकभन्दा लामो समय बिरामीको उपचार गर्दा उनले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेनन्।
डा.वाग्ले, सरकार र हामी
पिताम्बर खनाल - केहीहदसम्म डा. वाग्लेले दुर्गममा बसेर कार्य गर्नु भयो। जनताहरूले यो गुन कहिल्यै बिर्सदैनन्। शायद कुनै डाक्टरले ८० वर्षमा नलगाउने गुन ४६ वर्षमै डा. वाग्लेले लगाउनुभयो। सरकारले वाग्लेको उपचार गरेन वा गर्न चाहेन। सबै जनाले प्रस्ट बुझ्नु पर्छकि, हामिले अहिलेसम्म जनतालाई हेर्ने सरकार इतिहासमै बनाउन नसकेको कटु यथार्थ हो।
ती त माओवादी रैछन्
टीका विष्ट - नजिकैको सानीभेरीको काठे पुल तरेर छिवाङतिर गए ति मानिसहरु। एकैछिन पछि उनीहरु गएतिरै हाम्रो बन्दुकको जस्तै आवाज धेरैपटक आयो। दुई वर्षपछि मात्रै थाहा पाएँ– ती त माओवादी पो रैछन। हाम्रो घरमा सेल्टर लिन आएका रे। उनीहरुले नै गरेको फायरिङको आवाज रै’छ त्यो ।
घोषणापत्रहरु गफैगफको संग्रह
रामबाबु नेपाल - दलहरुले आफुले जिते मुलुकमा लाखौंको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने गफ गरेका छन्। लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। देशलाई उच्च सम्पन्न मुलुक बनाउने सपना देखाएका छन्। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन भनेर दुनिया हँसाएका छन्। घरवारविहिनलाई घर, बेरोजगारलाई रोजगार, रोगीको उपचार, भोकोलाई आहार सबै कुरा छन् घोषणापत्रमा।
बिन्ती भ्रष्टाचारीको समर्थन नगरौँ !
गणेश भट्टराई - किन हुँदैन हाम्रो देशको बिकास? किन बेरोजगार छौँ हामी युवा? अख्तियार दुरुपयोग गरि देशको ढुकुटिबाट करोडौँ रुपैया भ्रष्टाचार गरेको अदालतको निष्कर्श पछि चौध महिना सदरखोरमा बिताएर निस्किएका खुमबहादुर खड्काले १११ किलोको माला थाप्दै राष्ट्रावादका भाषण गर्दा हामी ताली पिट्छौँ, त्यसैले हुँदैन हाम्रो देशको बिकास, त्यसैले बेरोजगार छौँ हामी युवा।
आए नारन गए नारन
सुजित सिग्देल - तारे होटलमा लन्च, ब्रेकफास्ट गर्ने, कार्यक्रम स्थलमा भित्र भन्दा बाहिर बसेर गफिने, एक थान नेता छान्ने र्फकने भन्दा त्यहाँ भएका कार्ययोजनाहरु उपलब्धिमुलुक बन्न सकेका देखिँदैनन् ।
डेढ दशकपछि टिकाको पुनर्स्थापना
रोहित राई - हामी किरातीको आफ्नै मौलिक चाडपर्व छन्, तर दसैंमा जस्तरी हाम्रा अग्रज, अभिभावकहरुले शिरमा हात राखेर आर्शिवाद दिएको किराती चाड मलाई थाह छैन । त्यसैले अग्रजहरुको आर्शिवाद थाप्नको लागि पनि म दसैं मनाउँछु ।
देश विकासको खुड्किलो हो यो
श्रीकमल द्विवेदी - नेपालको अबको विकासको सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो डिजिटल क्रान्तिबाट सुरु हुनुपर्छ। नेपालमा लागू हुने क्रममा रहेको बायोमेट्रिक प्रणालीको डिजिटल परिचयपत्र तुरुन्तै लागू गरिहाल्नुपर्छ। औंलाको निसाना र आँखाको आइरिसको फोटो जुन एक व्यक्तिको कसैसँग मिल्दैन र कहिल्यै पनि परिवर्तन गर्न पनि मिल्दैन, यस्तो प्राकृतिक पहिचानसहितको परिचयपत्रले मानिसहरुले आफ्नो परिचय र नाम पनि परिवर्तन गर्न खोजे पनि केन्द्रीकृत प्रणालीले सही परिचय फेला पार्छ।
त्यो पो थियो दसैं
विनिता दाहाल - गाउँभरि दशैँमा खसी काट्ने भए पनि हाम्रो घरमा कहिल्यै काटमार गर्न हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो बुवा। सधैँ बुवाको सानोदेखिको साथी सुदर्शन काकाको घरमा खसी काटेर आधाआधा भाग लगाउने चलन थियो। अष्टमी, नवमीको दिन मनोहरा खोला पारिको बाराही थानमा पूजाको भाग लिएर चढाउन जानुपर्थ्यो। त्यो बेला काकाको छोरीहरु सोनी, अनिता र विनिता सधैँ राम्रा राम्रा लुगा लगाएका देखिन्थे। हाम्रा लुगा बुवाहरुले सधैँ सँगै ल्याइदिनुहुन्थ्यो। फरक थिएनन् होला तर हामीलाई उनीहरुकै लुगा मन पर्थ्यो।
कमरेडहरु, हामी बाटो बिराउँदै छौं
मिन्मा शेर्पा - मलाई याद आउँछ चितवनको शक्तिखोरमा कमरेड प्रचण्डले भनेका कुरा, "कमरेडहरु विश्वको आँखा जनमुक्ति सेनामा छ, तपाईंहरु बोल्न जान्नुहुन्छ बोल्नुस् जान्नुहुन्न नबोल्नुस् यसैमा पार्टीको हित छ।" हामीले पार्टी हितको लागि धेरै कुरा अन्धभक्त भएर सुनिरह्यौं। साँच्चिकै देशलाई माया गर्ने हो भने हामी बदलिन जरुरी छ। तपाईं बदल्छु भनेर लाग्ने हो भने यो सम्भव हुँदैन तर तपाईं बदलिनुपर्छ तब देश बदलिनेछ।
डेङ्गु- लौ न केही गरौं!
डा. सूर्य पराजुली - केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा डेङ्गुका बारेमा हामीले न त सुनेका थियौं, न त पढेका नै थियौं तर आजसम्म आइपुग्दा यो झन्डै महामारीको अवस्थामा देखिन थालेको छ। सन् २०१२ मा झापामा व्यापक रुपमा डेङ्गु संक्रमण देखिएको थियो। अहिले पनि आधा दर्जन यसको शिकार भई सकेका छन्। त्यसैले आज हामी यसै सन्दर्भमा गहिरिएर लाग्दैछौं।
श्रद्धाञ्जली: जसले सिकाए ध्यानको वैज्ञानिक विधि
देवेन्द्रप्रसाद सिटौला - बुद्ध स्वयंले भन्नुभएको छ– आऊ, स्वयं अनुभव गरेर हेर, साधनाबाट अनि तिमी विश्वास गर्ने छौ, यस पद्धतिलाई। त्यसैले आज जति पनि धर्म साधनाका विधिहरू छन्, तीमध्ये वैज्ञानिक, सत्य–तथ्यमा आधारित, अनुभव तथा बोधगम्य र समान अभ्यासबाट समान प्रतिफल दिने विपश्यना नै हो भन्ने मान्यतामा साधक दृढ छौं र यसो भन्नमा पर्याप्त आधार, तथ्य र साधनाको सामर्थ्य पनि छ, जुन विपश्यनाले प्रदान गर्छ।
पूरा होला स्कुलहरुमा कम्युटर योजना?
दीपक बस्याल - गर्नैपर्ने गृहकार्य नगरी, पुराना आफैंले गरेका प्रोजेक्टहरुको सफलता र असफलताको तथ्यांक अध्ययन नगरी एक्कासी अर्बौं रकम विनियोजन गरेर सरकारले अपरिपक्वता त देखाई नै सकेको छ। त्यसैले हामी बढी सचेत, सजग र जिम्मेवार भएर लागेनौं भने हाम्रो पसिनाको पैसा खाल्डोमा जाने निश्चित छ। यहाँनिर याद रहोस् यो नितान्त हाम्रै आफ्नै करबाट उठेको पैसा बाट सञ्चालित योजना हो।
एनआरएनलाई व्यापारीको पेवा मात्र नबनाउ
थानेश्वर सापकोटा - अहिले पनि बिदेशमा एनआरएनको माहोल उस्तै छ, ३० लाख नेपालीहरू बिदेशमा रहेको भनिएको भए पनि एनआरएनमा यसको १० प्रतिशत पनि आवद्ध गराउन सकिएको छैन । प्रवासी नेपालीहरुको हितभन्दा पार्र्टीगत राजनीति बढी मौलाएको छ जसको पछील्लो उदाहरण बिभिन्न देशमा रहेका यसका शाखाहरुको अधिवेशन हो, जहाँ पार्टीगत आधारमा कार्यसमितिहरूमा बाँडफाँड गरिएको छ ।
सञ्जीव पोखरेल - 'एक युगमा एकदिन आउने' भनेर प्रचार गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन ५ वर्ष नबित्दै नेपालमा दोस्रोपटक आउन लागेको छ । यदि सरकार र ६ राजनीतिक दलहरूले ठोकुवा गरेझैँ मंसिर ४ मा निर्वाचन भइहाल्यो भने नेपालीहरूले बहुप्रतिक्षित संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक भोट खसाउने अवसर पाउनेछन् । निर्वाचन गराउँछौँ भन्नेहरूले सार्वजनिक सभामा जतिसुकै किरिया खाएपनि मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चितता र अविश्वासको घेरामा जेलिएको प्रस्ट छ।
राजनीति नाफाको धन्दा
रवीन दाहाल - दशै आएको छ । मौका पर्‍यो भने हामी कृतिम अभाव सिर्जना गर्छौं । नाफा कमाउन कालोबजारी गर्छौं । भाउ बढाएर ग्राहकलाई बल्छीमा पाछौं । भुटुन, मसला, तरकारी, चामल, पिठो सबैथोकमा मिसावट गर्छौ । हामीले आम्दानी अनुसार कर तियौं भने देश बन्छ–बन्छ । राजनीतिबाट भन्दा बढि योगदान गर्न सकिन्छ । भारतमा पनि अनिल अम्बानी जो ठूला घरानाका ठूला व्यापारी हुन् । उनी पनि राजनीतिमा धेरै टिक्न सकेनन् ।
आलु छैन, पेँडाको धाक दिन्छौं हामी
श्रीकमल द्विवेदी - खेतिकिसानी गर्नेले मात्र मल, बिउ, सिँचाइको समस्या थाहा पाउँछ। खेती नगर्नेले किसानको नेतृत्व गर्नै सक्दैन।बिद्यार्थीको संगठनको नेतृत्व छोरा नै बिदेशमा उच्चशिक्षा पढ्दै गरेको बाबुले गर्नै सक्दैन। गाउँको तरकारी फलफूलले भोगेको बजारको समस्या सपिङ मलमा लत लागेकाले बुझ्न सक्दैन।
फोनको भरमा सरकारी खर्चमा पानी ट्यांकी घरमा खसाल्नेलाई मेलम्ची बनाउनुभन्दा ढिलो बनेर त्यसबाट आउने कमिशन प्यारो हुन्छ, आम मानिसलाई भोग्नु परेको पानीको समस्या बुझ्नै चाहँदैन।
आफ्ना सन्तानलाई उच्च स्तरका निजी बिद्यालयमा पढाउने नेतृत्वलाई गरिबका बच्चाहरु पढ्ने सरकारी बिद्यालयका समस्या समस्यै लाग्दैन।
मान्छेको रङ हजार
शिवानी सिंह थारु - पृथ्वीको रङ हजार, मान्छेको ढंग हजार भनेजस्तै, ट्वीट्को रङ हजार, ट्वीपलको ढंग हजार । कसले किन ट्वीट गरेको छले ट्वीटरमा कति घण्टा झुम्मिने निर्धारण गर्दो रहेछ । जस्तो लाइभ ट्वीट गर्न मन पराउनेहरूलाई त लाइभ फिड गर्ने दिनभरको जागिरसरह हुने भयो । मेरो पनि दैनिकीमा ट्वीटरले फरक त पारेको छ। यसलाई दुव्र्यसन सरहको लत त भन्न मिल्दैन। तर लतचाहिँ लागेकै हो।
एनआरएनबाट भाग्दैछ बौद्धिक जमात
शरद अधिकारी - एक दशकको यात्रा पूरा गरेको गैरआवासीय नेपाली संघको आउँदो सम्मेलनको रौनक विगतभन्दा फरक हुने संकेत देखिएको छ। सम्मेलनको महिनौंअघिदेखि संघको दुई वर्षका लागि चुनिने अध्यक्षमा कम्तीमा ५ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। गैरराजनीतिक चरित्रको सामाजिक संस्था भनिए पनि संघभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भित्रिएको छ।
सार्वभौमसत्ता माथिको नांगो अतिक्रमण चुपचाप पढेर र सुनेर बस्नु परिरहेछ: भट्टराई
बाबुराम भट्टराई - शुरुशुरुमा म पनि राष्ट्रियता सम्बन्धी विवेकसम्मतभन्दा आवेगात्मक धारणा बढ़ी राख्दथें - मेरो पिएचडी शोधग्रन्थ, संयुक्त जनमोर्चाकालका मेरो नेत्रित्वमा भएका अनगिन्ति राष्ट्रियतासम्बन्धी आन्दोलन, चर्चित ४०-सूत्रीय मागपत्र आदि त्यसका दसी हुन् ।
गणेशमान: जो सधैं नेपाली स्वाभिमानका लागि लडे
विपुल पोख्रेल - गणेशमान सिंह अभिमानका धनी थिए । राजा वीरेन्द्र र बीपीको भेटपछि गणेशमानले बीपीलाई सोधेका थिए, ‘राजाले तपाईंलाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्यो‍ कि तपाईं भनेर?’ बीपीले यसको स्पष्ट जवाफ दिएनन् र भने, ‘हामी राजाले सबै जनतालाई तपाईं भनुन भनेर लडाई लडिरहेका छौं गणेशमानजी, त्यसकारण मलाई उनले के भने भन्ने कुराले महत्व राख्दैन ।’
पक्षघातले ग्रसित देशको प्रणाली
श्रीकमल द्विवेदी - प्यारालाईसिस अर्थात पक्षघात हात गोडामा हैन मस्तिष्कमा हुन्छ । मस्तिष्कको हातगोडा लगायतका बाहिरी अंगहरु चलाउन आदेश दिने भागले काम गर्न छोडे पछि सग्ला हात गोडा पनि चल्न सक्दैनन् ।
चोटले कसै कसैको मस्तिष्कबाट आएको आदेश अंगसम्म पुर्‍याउने नसा (नर्भ) मा समस्या आएर पनि अंग चल्दैन । बाहिरी रुपमा मानिस सग्लो र स्वस्थ्य देखिन्छ तर, काम भने केही पनि गर्न सक्दैन, किन कि उसको सोच्ने, सूचनाको प्रशोधन गर्ने र के प्रतिकृया गर्ने भन्ने आदेश दिने प्रणाली नै बिग्रिएको हुन्छ।
ह्यापी बर्थडे राइट लिभिङ गुरु: तपाईंको स्वधर्म के हो?
देवेन्द्रप्रसाद सिटौला - स्वधर्ममा जान खोज्दा दुःख पनि आउँछ । योगी हुने संस्कार रहेको मान्छेलाई जबर्जस्त कुनै अन्य पेशामा लगाउँदा र वैवाहिक सम्बन्धमा बाँध्न खोज्दा सफल हुन नसकेको वा केही समयमा टुट्न गएका उदाहरणहरू पनि छन् । सामान्य जीवनमा हेर्ने हो भने पनि चाहना वा चाखबिनाको पेशा र व्यवहार खल्लो, उत्प्रेरणारहित र असफल नै लाग्छ ।
ल्याप्चेको पनि दिन फिरे!
रामेश्वर खनाल - साँच्चिकै सुरक्षित प्रणाली हो भने हवाईजहाज चढ्न बोर्डिंग पास चाहिने दिन अब सकिए । बोर्डिंग पासको अधकट्टी लिन मान्छे पनि राख्नु परेन । तालाचाबी चाहिने गाडी, घर, सुटकेश, आदि पनि सेन्सरमा औंठाछाप देखाएर खोल्न र बन्द गर्ने दिन नजिकै छन् ।
क्यान्सर लागेपछि कति वर्ष बाँचिन्छ?
दीपक उप्रेती - करिब ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर मरिचमान सिंह कति लामो समय बाँचे? कति खर्च गर्ने भन्ने कुनै परिवारको निजी कुरा होला तर चान्चुन १ करोड खर्च गरेर केही समय आफू बाँच्ने वा त्यो पैसा ले आफ्ना सन्तान हरू को भविश्य मा खर्चिने भन्ने मरिचमान परिवारले सोचे वा सोचेन ।
म विधिको पक्षमा, तपाईं नि?
भवसागर घिमिरे - हामी कसैको पक्षमा छैनौं र हुन्नौं पनि । मात्र उनीहरूको व्यवहार पछ्याउँछौं । कालो कोटभित्र कालो मन लिनेहरू पनि छन् यहाँ । सेतो कोटभित्र कालो मन हुनेहरू पनि छन् । कालो कोटभित्र सेतो मन । सेतो कोटभित्र सेतो मन हुनेहरू भने निकै कम छन् । यी हामीले भोगिसकेको, देखिसकेको र बुझिसकेका सत्यहरू हुन् ।
तिजमा कति राम्रा हौ दिदीबहिनीहरू!
रश्मि रैखोला - ठिकै पनि हो व्रत बस्नु, रमाइलो गर्नु, भगवान मान्नु । केटी मन्दिर गइन भन्दैमा ऊ भगवान नमान्ने पटक्कै हैन, नत्र किन निरााहर ब्रत बस्थी ? उसलाई रमझम, भिडभाड खासै मन पर्दैन । घरबाट टाढा, साथीसंगी पनि खासै छैनन् । नाच्न चाहिँ खुब मन पर्छ उसलाई । एकचोटि नाच्न सुरु गरी भने रोकिने नामै लिन्न ।
पानी खाने कि कोक?
डा. खगेन्द्र दाहाल - सानो हुँदा कोक खान पाउनु ठूलो रवाफ हुन्थ्यो । पैसा पनि हुन्थेन कोक, फ्यान्टा खान । पैसा हुनेले फ्रूटी खाँदा आफूले भने पानी खानु पर्थ्यो पैसा नभएर । एकपल्ट बुबाले १० रुपैयाँ दिदा २ घण्टा लाएर साथीहरुलाई देखाएर फ्यान्टा खाँदा आफ्नो ठूलो इज्जत भएको ठानेको थिएँ । कसैकोमा पाहुना भएर जाँदा स्क्वास, ट्यांङ इत्यादिले सत्कार हुँदा आफूलाई ठूलो महसुस हुन्थ्यो ।